ताप्लेजुङमा किन भइरहन्छ ठूला आगलागी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ताप्लेजुङमा किन भइरहन्छ ठूला आगलागी ?
फागुन १९ गते, २०७७ - ०७:२४
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका–३ स्थित दोभान बजारमा मंगलबार आगलागी हुँदा ४९ घर जलेका छन् । ५५ परिवार विस्थापित भएका छन् । भौतिक क्षति यकिन भइसकेको छैन । बजारको मुख्य भागको ६५ प्रतिशत घर जलेको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बूले बताए ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – ताप्लेजुङमा यही वर्ष आगलागीका तीन ठूला घटना भएका छन् । माघ २० गते सिरिजंघा–१ सिनाममा पाँच घर जले । पुस दोस्रो साता पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा लागेको आगो महिना दिनपछि मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो । जसमा १५० हेक्टर वन नष्ट भएको थियो । मन्दिर समेत जोखिममा पारेको थियो । फुङलिङ बजारको पुरानो बैंक लाइनमा वैशाख १९ गते राति १२ घर जले । २८ परिवार विस्थापित भए । त्यहाँका विस्थापित अझै तंग्रिन सकेका छैनन् ।
‘एकपछि अर्को गरेर निरन्तर आगलागी हुन थाल्यो’, फुङलिङका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले भने, ‘यसले हामी उच्च जोखिममा परिरहेका छौं । यस विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’ यसअघि वीरेन्द्र चोक, तोक्मे क्षेत्र, शेर्पा टोल र टुक्रेमा आगलागीका ठूला घटना भएका थिए ।
वीरेन्द्र चोकमा २०६० चैत १५ गते भएको आगलागीमा ४५ घर जल्दा ५१ करोड हाराहारीमा क्षति भएको थियो । त्यसैगरी २०७१ चैत ९ गते तोक्मे बजारमा भएको आगलागीमा ४४ घर जल्दा ३० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यसअघि २०६९ माघमा शेर्पा टोलमा आठ घर जलेका थिए । जसमा २ करोड ५० लाख र २०७० साल कात्तिकमा टुक्रे बजारमा पाँच घर जल्दा १ करोड ५० लाखको क्षति भएको थियो ।
फागुन १९ गते, २०७७ - ०७:२४ मा प्रकाशित